Dowladda Denmark oo ka noqotay dib u qiimeenta sharciyada qaxootiga Soomaaliyeed. – Gobolada News Agency
Dowladda Denmark oo ka noqotay dib u qiimeenta sharciyada qaxootiga Soomaaliyeed.
03/01/2017 caaqil opinion, Wararka, Yurub
Dowladda Denmark ayaa gelinkii dambe ee maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday inay dib uga noqotay go’aankii ka dhanka ahaa qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalkaasi kaa oo ku saabsanaa dib u eegista sharciyada 1200 qaxooti Soomaaliyeed.
warbixin ay soo saartay dowladda dalka Denmark bartamihii sanadkii tagay 2016 ayay ku sheegtay inay dib u eegis ku sameyn doonto sharciyada magangeliyada 1200 qaxooti Soomaaliyeed, kadib markii dowladdaasi ay sheegtay in xiligan aanu jirin baahi ay halkaasi ugu sii nolaan karaan, magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya ay yihiin meelo nabad ah.
Waxay dowladda Denmark maanta go’aansatay in ay ka noqotay dib u qiimeentii lagu sameeyey 400 qaxooti Soomaaliyeed, halka 800 kale oo sugayay inay maraan wareysi ayaa iyagana dib looga laabtay wareysiyadii lala yeelan lahaa.
Warkan oo ah mid aad u farxad geliyey qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi gaar ahaan tirada 1200 ruux ay quseysay iyo kuwa kale oo wadnaha farta ku hayay ayaa ku soo beegmaya xili Dowladdaha Denmark iyo Norwey ay qaateen go’aamo ka dhan ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalalkaasi.
Lama oga dowladda Norwey oo inta badan soo minguurisa sharciyada dalkaasi inay qaadan doonto go’aan la mid ah kan ay maanta ku dhawaaqday dowladda Dalka Denmark.
Si kastaba war ka soo baxay dhawaan Qaramada Midoobey ayay kaga dalbadeen dowladdaha Denmark iyo Norwey inay dhowraan xeerka qaxootiga Adduunka, isla markaana aysan si qasab ah u celin qaxootiga Soomaaliyeed, maadaama xaalada Amaan ee Soomaaliya xiligan aysan ahayn mid la isku haleen karo.
Previous Post:Madaxweyne kuxigeenkii hore Puntland oo beeniyay inuu ku biiray Somaliland
Next Post:Xasilooni Siyaasadeed ayaa dalka xal u ah